» कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मुक्तान भन्छन्,-‘गाउँसभा असार १० मै टुङ्ग्याएका हौं, कसले के आरोप लगाउँछन् म जाँन्दिन ।’
३ श्रावण २०७८, आईतवार १३:१३
मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंकबहादुर मुक्तानले गाउँसभाका विषयमा गलत नियतका साथ केही मिडियामा खबर सम्प्रेषण गरिएको दाबी गरेका छन् सन्चारमाध्यमसंग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष मुक्तानले गाउँपालिकाको बजेट निर्माणका सम्बन्धमा आएका समाचारहरु केबल हाँस्यास्पद रहेको बताएका हुन् । कैलाश गाउँपालिकाले असार १० गते नै गाउँसभा सुरु गरी नयाँ बजेट पारित गरेको र वन सम्बन्धी विधेयक मात्रै पारित गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधिमा टेकेर कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम, बिनियोजन विधेयक, आर्थिक बिधेयक पारित गरेको र प्रमाणिकरण भएको अध्यक्ष मुक्तान बताउँछन् । सामाजिक सन्जाल तथा मिडियामा आएका खबरबारे पालिका अध्यक्ष मुक्तानसंग गरिएको कुराकानी ।
तपाईमाथि मनोमानी ढंगले बजेट निर्माण भएको र गाउँसभामा पेस भएको भन्ने आरोप वडाध्यक्षहरुले लगाएका छन् नि ?
–कसले के आरोप लगाउँछन् म जान्दिन । तर, विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम, बिनियोजन विधेयक, आर्थिक बिधेयक असार १० गते उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको हो । प्रस्तुत भएका कार्यक्रम तथा विधेयकहरुमा दफावार छलफल गरी त्यही दिन टुंग्याइएको हो । गाउँसभामा सबै सभासद्हरुले गर्नु भएको छ । उनीहरु सबैजना उपस्थित भएर ताली बजाएरै पारित गरिएको हो । बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु गाउँसभामा प्रस्तुत हुनुअघि कार्यपालिकाले असार ८ गते पारित गरी गाउँसभामा लैजाने सिफारिस गरेको हो । त्यसअघि जेठ २७ गते कार्यपालिकाको बैठक बसेर सर्बसम्मत रुपमा असार ५ गतेभित्र सबै वडाका योजनाहरु पेश गर्नका लागि सर्बसम्मत रुपमा निर्णय भएको थियो । तर ५ गतेभित्र केही वडाले बजेटको सूचि दिएन । ढिला गरी योजनाको सूचि आयो र ८ गते कार्यपालिका बैठक बसरी गाउँसभामा सिफारिस ग¥यौँ । पछि पो थाहा भयो, योजना ढिला आउनको कारण त । नेकपा एमालेका केही ब्यक्तिहरुले गाउँपालिकामा योजना पेश नगर्न वडाध्यक्षहरुलाई दवाब दिएका रहेछन । तिनै ब्यक्तिहरुद्वारा अन्तिमसम्म वडाध्यक्षहरुलाई उचाल्ने काम भईरह्यो । अन्तमा २७ गतेको कार्यपालिका बैठक बहिस्कार गर्नेमा तिनै ब्यक्तिहरुको मुख्य भुमिका देखियो । बैठक बहिस्कार गराएर प्रक्रिया अघि नबढेपछि अबिरल बर्षाको कारण गाउँका बाटो अबरुद्ध भएर जनता गाउमै थुनिएर बसिरहँदा समेत बाटो सुचारु गर्ने निर्णय गर्न अफ्ठ्यारो प¥यो भने वडाका कयौँ योजनाहरुको भुक्तानी प्रकृया अबरुद्ध भयो । वडा नं ९ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयमा बजेट अभावका कारण शिक्षकहरुको तलब भुक्तानी नपाएको समस्या पनि बैठक बहिस्कार भएपछि समाधान हुन सकेन । भएको सत्य र आधिकारिक कुरा यही हो । अरुले बाहिर गएर कसले के भन्छ, के गर्छ म मतलब गर्दिन ।
– बजेट बनाउने विषयमा तपाईंले हेटौँडामा बसेर मनोमानी गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
मैले भनिसकेँ जेठ २७ को कार्यपालिका बैठकले सर्बसम्मत रुपमा असार ५ गतेभित्र आफ्ना वडाका योजनाको सूचि पेस गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही बमोजिम केहीले ढिला गरी योजनाको सूचि पेस गरे । त्यही सूचि बमोजिम बजेट निर्माण हुने हो । नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी वडाबाट प्राप्त योजनाहरुलाई गाउँसभामा पारित गरिएको हो । हामीसँग त्यो सूचि कार्यालयमा सुरक्षित छ । र, अहिले पारित योजनाको सूचि पनि सार्बजनिक गरिसकेका छौँ । हाम्रो वेवसाइटमा कुन वडामा कहाँ के कति बजेट बिनियोजन भयो भन्ने किताब नै राखेका छौँ । जोकोहीले हेर्न सक्नुहुन्छ ।
–अनि असार २७ गते कार्यपालिका बैठक बहिस्कार भनेर ८ जनाले हस्ताक्षर गरेर मिडिया बाजी गरेका थिए, त्यो चाहिँ के हो ?
असार १० गते सुरु भएको गाउँसभाबाट वन तथा वातावरण विधेयक पारित हुन बाँकी थियो । त्यसलाई छलफलका लागि पेस गरिएको थियो । त्यसका अलावा वडाध्यक्ष वा कार्यपालिका सदस्यहरुले भनेजस्तै केही योजनाहरुको शुद्धाशुद्धि, सम्पादन लगायतका बिषयहरु बाँकी थिए । ती सबै कुरालाई समेटेर २८ गते गाउँसभा समापन गर्ने र त्यसअघि २७ गते कार्यपालिका बैठक बस्ने सल्लाह भयो । यो बीचमा अबिरल बर्षा भयो । हामी हेटौँडाबाट चुनियाँको बाटो हुँदै सबैजना वडाध्यक्षहरुसहित बाटो निर्माण गर्दै, पहिरो हटाउँदै कार्यालय ढिलागरी कार्यपालिका कार्यालय पुग्यौँ । स्वाभाविक रुपमा एकदिनमा कैलाश गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न हुन सक्दैन । भूगोलका हिसावले टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने कार्यपालिका सदस्यहरु बास नबसी हुँदैन । त्यसैले २७ गतेको कार्यपालिका बैठक बाटो बिग्रेर ढिलो पुगेकाले र अन्य आन्तरिक तयारी कम भएकाले समयमै सुरु हुन सकेन । समयमै सुरु नभएपनि आखिर बास बस्नु त पर्छ नै भोलिको लागि । भोलिपल्ट बिहानै कार्यपालिका बैठक सकाएर त्यसपछि गाउँसभामा जान पनि सकिन्थ्यो । वडाध्यक्ष ज्यूहरुलाई नेकपा एमाले पार्टीकै केही अमूक मान्छेहरुले कान फुकेछन्, नेगेटिभ कुरा सिकाएछन् । त्यही बहकाउमा उहाँहरु लाग्नुभयो र कार्यपालिका बैठक बहिस्कार गरेको चिठी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थमाएर हिँड्नु भएछ ।
–अनि उहाँहरुले कार्यपालिका बैठक बहिस्कार गर्दा गाउँसभा प्रभावित भएन त ?
मैले अघि नै भने गाउँसभामा जम्मा वन र वातावरण विधेयक मात्रै पारित हुन बाँकी थियो । अरु सबै १० गते नै पारित भइसकेको थियो । अब उहाँहरुले बैठकै बहिस्कार गरेपछि वन तथा वातावरण विधेयक पारित हुन सक्ने अबस्था रहेन । उहाँहरु बहकाउमा लागेर बाहिर बाहिर अरु नै गतिविधि गर्दै हिँड्ने भएपछि कार्यालयको तर्फबाटै योजनाहरुको सम्पादन, शुद्धाशुद्धि लगायत कामहरु सकाएर गाउँसभा पनि समापन भएको घोषणा ग¥यौँ ।
–कार्यपालिका बैठक नबस्दाका असरहरु परे कि परेनन् ?
किन नपर्नु ? कतिपय महत्वपूर्ण कुराहरु कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने थिए । भुक्तानीका कामहरु थिए । अबिरल बर्षाले सबै गाउँका बाटाहरु भत्केका थिए, गाउँलेहरु गाउँमै थुनिएका थिए । त्यसको सहजीकरण नीतिगत निर्णय गराएर गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै केही क्रमागत योजनाका कुराहरु थिए । काम गरेका भुक्तानीहरु लिनुपर्ने केही कामहरु बाँकी नै थियो । यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि वडाध्यक्षज्यूहरु गम्भीर भएर धैर्य गरिदिनु भएको भए हुने थियो, तर कसै कसैको बहकाउमा परेर बैठक छाड्नुभयो । वडाध्यक्षहरुलाई बैठक बस्न नदिएर भड्काउनेहरुले के पाए कुन्नि ? तर गाउँलेहरुले दुःख पाएका छन् । हामी कार्यालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्दैछौँ ।
–अब कहिले बस्छ कार्यपालिका बैठक ?
आवश्यकता अनुसार बस्छ । कुनै हतार छैन । गाउँसभाले पारित गरेका योजनाहरु अब कार्यान्वयनमा जाने बेला कार्यपालिका बैठक बस्छ ।
–कैलाश गाउँपालिकामा वडाध्यक्ष र तपाईबीच किन यस्तै विवाद भइरहन्छ ?
खोइ मलाई थाहा छैन । म जनताको काम निस्वार्थ हुनुपर्छ भनेर निजी जीवनलाई नै बिर्सेर काम गरिरहेको छु । बैठकमा कोही पनि कार्यपालिका सदस्य तथा गाउँसभाका सदस्यहरुले नीतिगत कुरा उठाउँदैनन् । बाहिर बाहिर अनेक कुरा गर्छन् भने मलाई केही भन्नु छैन । मेरा पनि कमी कमजोरी छन् भने बैठकमा उठाउँदा हुन्छ । आलोचनाले मान्छे परिपक्क बन्ने हो । म आलोचना सुन्न सँधै तयार छु । तर, आलोचनाको नाउँमा इगो बोकेर आउँछन् भने भन्नु केही छैन ।
–उसो भए गाउँसभाका बारेमा वडाध्यक्षहरुले गरेको टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन ?
छैन । उहाँहरु आफै हस्ताक्षर गरेर गाउँसभामा ताली बजाएर बजेट पास गर्ने । अनि अरु अरु नै कुरा गर्दै हिँड्ने ? उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ, गाउँसभाको फोटो, भिडियो सबै छ । उहाँहरुले यो कुरा बुझ्नुपथ्र्यो कि, यो हाम्रो कार्यकालको अन्तिम बर्ष पनि हो, त्यसैले सबैले देखिने काम गरौँ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ७० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरी कार्यान्वयनमा हामी लम्किँदैछौँ । यो संवेदनशील बर्षमा उहाँहरु कसैको बहकाउमा लागेर हुँदैन ।